कथा : भूकम्पको झड्का « Janata Samachar
कथा : भूकम्पको झड्का
प्रकाशित मिति : बैशाख ११, २०७८ शनिबार
दुईवटा बियरलाई रंगीन पत्रिकामा बेरेर त्यसलाई कालो रंगको प्लास्टिकमा हालेपछि पसले मुस्कुरायो । ऊ पनि मुस्कुरायो तर पसले झैं उपहासले होइन, प्रेमले । वरपर हेर्यो र रातिहुँदी वियर किनेको कसैले देख्यो कि ? चनाखो भयो । आश्वास्त भएपछि पर्सबाट एक हजारको नोट दिदै भन्यो, ‘ह्याप्पी न्यू इयर ब्रो । कहिलेकाहिँ यसो मस्ती पनि गर्नुपर्छ ।’
यसो भन्दा ऊ मधुर धुनमा नाचे जस्तै गरि हल्लिरहेको थियो । उसको अस्थिरताले बेल्टमा बाँधेको स्टाइलिस किरिङ् छन्द्रङ छन्द्रङ बजिरहेको थियो । दुब्लो र अग्लो यो केटो बेला बेलामा यो पसलमा झुल्कने गर्छ र जहिल्यै दुई वटा बियर किन्ने गर्छ । न कम न ज्यादा ।
शुभकामना फर्काउनुको सट्टा पसलेले केही चेतावनीयुक्त शब्दमा भन्यो, ‘काठमाडौंमा कालो प्लास्टिक झोला ब्याण्ड भएको छ । लास्ट पिस मात्रै छ । तिमेर्का दिन सकिए, बुझ्यौ ?’ केटोले उसको चेतावनी सुन्दै पैसा फिर्ता लियो । त्यसपछि झोलालाई हेर्यो र ओठ लेप्रायो । पसलेले बुझ्यो, झोलालाई होइन, उसले प्लास्टिक बन्दको निर्देशन दिने सरकारको निर्णयलाई ओठ लेप्राएको हो ।
केटो पसलबाट निस्किएर अध्याँरोमा टोलाइरहेको मोटरसाइकल नजिक पुग्यो । निलो रंगको पल्सर अध्याँरोमा कालो देखिएकोले ऊ एकछिन अडियो । आफ्नै मोटरसाइकल हो भन्ने आश्वास्त भएपछि लेगार्डमा बियर झुण्ड्यायो । सिटमा बसेर मिररमा अडिएको हेल्मेट निकाल्दै सुकेको ओठ पुछ्यो । त्यसपछि कसैलाई फोन गर्यो र भन्यो, ‘‘कहाँ हो ?’
मोबाइलमा कसैले उसलाई ऊ जाने ठाउँको ठेगाना बताइदियो । मोबाइल राख्ने वित्तिकै मोटरसाइकल सेल्फ बटन थिच्यो । इन्जिन खचचचच ग¥यो तर स्टार्ट भएन । पुनः सेल्फ थिच्यो । फेरि खचचचच गर्यो र बन्द भयो । एकपल्ट रक्सी पसलेलाई हे¥यो र थोरै लजाउँदै ट्याङ्कीमा पेट्रोल भए नभएको अनुभव गर्न मोटरसाइकल हल्लायो । केही आश्वस्त भएपछि किक हान्यो । किक हान्ने वित्तिकै
मोटरसाइकल स्टार्ट भयो । एक–दुई पल्ट मोटरसाइकलको ह्यान्डिल बटारेर घुईं घुईं पार्यो र विजयी मुस्कानले रक्सी पसलेलाई हेर्यो । बल्भ सिधा उभिएको पसले अर्को ग्राहकसँग रक्सी बेच्दै रक्सी नखान उपदेश दिइरहेको थियो । उसले मोटरसाइकलाई अलिकति घुमायो । जब साइलेन्सर पाइप पसलको सिधा पर्यो भन्ने अनुभव भयो, उसले ह्याल्डीललाई बेस्सरी घँुई घँुई पार्यो । एक मुस्लो धुँवा रक्सी पसलतिर पसेपछि पसलेको गाली खानुअघि नै मोटरसाइकल बेपत्तासँग हुँइकायो ।
जुन रफ्तारमा रक्सी पसलबाट निस्किएको थियो, त्यहि शैलीमा करिव स्पिड राइडरले प्रतिस्पर्धा गरेझैं उसको मोटरसाइकल अरुलाई पछि पार्दै कुदिरह्यो । उसको स्पिड देखेर अरु सवारीधनी उसलाई पुलुक्क हेर्थे र मनमनै गाली गर्थे । ऊ यी मान्छेहरुका मनोभाव नबुझ्ने कहाँ हो र ? तै पनि सबै कुराबाट बेखवर झैं उसको गति बढिरह्यो । केहीबेर कुदाएपछि, अलिकति अँध्यारो गल्लीमा झरेपछि उसको स्पिड केही कम भयो । फराकिलो आँगन भएको घरको गेटअघि पुगेपछि उसले मोटरसाइकल रोक्यो । गेट खोल्यो र आफ्नो बहान डोहोर्याउदै घरभित्र पस्यो । झलमल्ल बत्ति बलिरहेको आँगनमा केही मोटरसाइकलले उसको मोटरसाइकललाई पर्खिरहेका थिए ।
पहेँले रंगको एउटा बाइकलाई आफ्नो बाइकको छिमेकी बनायो र बियरको झोला बोकेर माथि उक्लियो । भित्र कतै संगीतको धुन बजिरहेको थियो । ऊ उक्लिदै गएपछि संगीत पनि चर्को हुँदै गएको उसको कानले महसुस गर्यो ।
‘‘‘ह्याप्पी न्यू इयर गाइज ।’ ढोका खोलेर उसले संगीत भन्दा चर्काे आवाजमा हाँस्दै भन्यो, ‘‘‘यसो कहिलेकाहीँ त मस्ति गर्नुपर्छ नि है ।’ यसो भन्दै गर्दा उका दुबै हात आत्म समर्पण शैलीले माथि उठेका थिए ।
संगीतसँगै हल्ला गरिरहेका केही पुरुष–महिलाको आवाज शान्त भयो र उनीहरुको मुख ढोका तिर फर्कियो ।
‘‘‘ह्याप्पी न्यू इयर यार, तर आज ११ गते भैसक्यो । विस गर्न ढिला भएन ?’ केही मोटो केटो उसको नजिक आयो र उसले बोकेको प्लास्टिक लियो । अरुले ल्याएका बियर र ह्विस्कीका बोतलले उसले ल्याएका
बोतललाई पर्खिरहेका थिए । दुई बियर त्यो कुनामा उभिएपछि अरु मादक पदार्थहरु मुस्कुराए ।
‘‘‘नयाँ वर्षपछिको पहिलो भेट । सेलिब्रेसनको निहुँ यो भन्दा अरु के हुन सक्छ ? होइन त सुके ।’ अर्को साथीले उसलाई धाप मा¥यो र डान्स फ्लोरमा तान्यो । त्यसको टिसर्ट पसिनाले राम्रैसँग भिजेको थियो । सायद, यतिखेरसम्म नाचिरहेको थियो ।
अर्को गीत सुरु भयो । अरु थाकिसकेका थिए । ऊ फ्लोरलाई भत्काउँला झैँ गरेर नाच्न थाल्यो । केही अरु उसलाई साथ दिन थाले । नाच्दै गर्दा एउटी युवतीले उसलाई एउटा वियर दिदै भनि, ‘‘‘पहिले पिऊ यार, नाच्न के को हतार ? पूरा रात बाँकी छ ।’ हर्हराउँदै मिठो अत्तर उसको नाकसम्म पुग्यो । सुन्दरीको सौन्दर्य यसै पनि आह्लादित पार्ने खालको थियो र ड्रेसअपमा एक प्रकारको मादकता । नाईं भन्नै सकेन ।
पहिले युवतीको हातबाट बियरको ग्लास लियो । त्यसपछि जुन हातले ग्लास समाएकी थिई, त्यही हातको सहायताले ऊ स्टेजबाट ओर्लियो । युवतीले तान्दै सोफासम्म ल्याई, जहाँ उसको वाइन ग्लास स्व्ोत रुपमा उभिरहेको थियो ।
‘खै तिम्रो स्पेसल साथी ?’ उसले हातलाई विस्तारै छाडिदियो तर मन नलागी नलागी ।
‘को हुन्छ तिम्रो स्पेसल, त्यही शैलेस ।’
‘इनोफ यार, उ मेरो साथी नै होइन, स्पेसल त परको कुरा ।’
‘तिम्रो अघि–पछि देखिन्थ्यो त सधैं ।’
‘म पनि उसलाई सधैं मेरो अघि–पछि देख्थेँ ।’
दुबै हाँसे ।
‘बाबाले राखिदिएको बडिगार्ड थियो । किनभने ऊ सधैं फस्ट आउँथ्यो ।’
‘ओके, तिम्रो बडिगार्ड हुन फस्ट आउनु पर्दोरैछ ।’
‘क्लास टप भएर पनि हुँदैन । सरकारी जागीर हुने इच्छा भएको हुनुपर्छ । चाहे त्यो मान्छे जनि बेबकुफ नै किन नहोस् ।’
‘हुँ । इन्ट्रेस्टिङ् यार । तिम्रो मनमा शैलेस यसरी बसेको छ भन्ने कल्पना नै गरेका रहेनछौं ।’
‘केवल तिमीले । अरु साथीहरुलाई थाहा छ ।’
‘ओहो, म बेबकुफ पो भएको रहेछु ।’
‘हो, यो सब्जेक्टमा सधैं फेल हुन्छौं । तिमी यसरी फेल भएको मन पर्दैन ।’
‘प्यारी स्विटी, पास हुन के गर्नुपर्छ ?’ उसले युवतीको ओठ पुछिदियो, जहाँ एक थोपा वाइन झुण्डीरहेको थियो ।
‘अब ग्राजुएसनका ४ वर्षसम्म सधैं फस्ट आउनु पर्छ ।’
‘तर म सिभिल सर्भेन्ट बन्न चाहन्न ।’
‘के बन्न चाहन्छौ ?’
‘हलिउड एक्टर ।’
युवती वाइनको ग्लास रित्तयाउँदै थिई । उसको हलिउड सपना सुनेर मज्जाले हाँसी । टेवलमा फर्कदै गरेको खाली वाइनको ग्लास पुर्लुक्क लड्यो ।
‘हाम्रो प्राइम मिनिस्टर जस्तो ? ऊ पनि हलिउड एक्टर बन्न चाहन्थ्यो रे ।’ उसको हाँसो रोकिएन ।
‘नपत्याएको ? कालो गगल्स लगाएको बेला हेर त, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हलिउड हिरो जस्तै देखिन्छ ।’
केटोले पछाडि कलरमा झुण्डिएको गगल्स लगायो र भन्यो, ‘…अनि म पनि ।’
युुवतीले उसको छातिमा भुक्क हिर्काई ।
‘यु आर गुड बोइ ।’
‘तर तिम्रो बाउको विचारमा म गुड बोइ होइन । मलाइ सबै थाहा छ ।’
‘हो, तिमीसँग हिडेको उहाँलाई मन पर्दैन । तिमी हाम्रो टोलको सबैभन्दा बिग्रेको केटो रे ।’ युवती उठी र वाइनको बोतल लिएर आई । फेरि के सोची कुन्नी, कुनामा उँघिरहेको वियरको बोतल लिएर आई र उसको ग्लासमा खनाइदिई ।
‘तिमी किन राम्रो बन्दैनौ त । राम्रो बनेर देखाइदेऊ न । प्लीज ।’
‘राम्रो हुन सिकाइदेऊ न त ।’ उसले केटीको हात उठायो र चुम्यो ।
‘अब कलेजमा फस्ट आइदेऊ, लोकसेवाको तयारी सुरु गर । त्यति भए पुग्छ ।’
‘त्यसो भए, मलाई राम्रो हुनुछैन । बाई ।’
केटो जुरुक्क उठ्यो र गिलासमा रहेको सबै वियर घटघट पार्यो । ग्लासलाई टेवलमा बजारेर डान्स फ्लोरमा गयो । त्यहाँ दुईवटी केटी नाचिरहेका थिए । उनीहरुको बीचमा पसेर साथ
दिन थाल्यो । गीत बजिरहेको थियो, ‘उध्रेको चोली छ है त्यै पनि लाइन्छ…।’
केटीले बाँकी रहेको वाइन रिसले स्वाट्ट पारी । त्यसपछि खुट्टा बजार्दै स्टेज चढी र केटालाई तान्दै झारी । ‘‘‘मेरो ड्याडले तिम्रो बारेमा जे सोच्छ, बिल्कुल ठिक सोच्छ । ही इज राइट ।
तिमी एक नम्बरको गुन्डा हौ ।’ उसले केटोलाई त्यहि सोफामा ल्याएर थचार्दै भनी, ‘‘‘मेरो ड्याडले पुरै मिनिस्ट्री हाँकेको छ । मेरो बारेमा जे सोच्छ, राम्रो सोच्छ । तिमी थुक्न लायक पनि छैनौ ’
‘देश नै हाँक्छ होला तर मेरो बारेमा केही जान्दैन । र, मलाई नबुझी गुण्डा भन्ने अधिकार न तिमीलाई छ न तिम्रो बाऊलाई ।’
‘अहो, त्यसो भए यहाँलाई के भन्नु पर्यो, श्रीश्री रबीशंकर ?
‘रबीशंकर कालो छ, म गोरो छु ।’
‘त्यसो भए आमीर खान भन्नुपर्यो ?’
‘उसले डिभोर्स गर्यो । अहिले किरणलाई विहे गरेको छ । म स्कुल देखिको साथीसँग विहे गरेपछि डिभोर्स गर्न चाहन्न ।’
‘के हिटलर भन्नुपर्यो ?’
‘ऊ चित्रकार बन्न चाहन्थ्यो । उसलाई आर्ट स्कुलले एड्मिसन दिएन । यहि रिसमा हिटलर बन्यो । र, प्लीज मलाई हिटलर बनाउने प्रयास नगर । म हलिउड…।’
केटो बोल्दा बोल्दै उसले मुख थुनिदिई र उसमाथि चढी ।
‘आइ कान्ट लिभ विदाउट यु, किल मी …।’
रातभार पार्टी चल्यो र सँगै चल्यो ती दुईको रोमान्स । विहान चार बजे, नृत्य र नशाको थकानमा कोही बरण्डामा, कोही बुईंगल र कोही छतमा सुते । घरबेटी देश बाहिर बस्थे र मुख्य ढोकाहरु बन्द थिए । एकजना मोटे केटा यो घरको संरक्षक थियो । उसैको प्रायोजनमा शुक्रवारको त्यो साँझमा पार्टी सुरु भएको थियो र विहानतिर अन्त्य भएको थियो । यसपछि केही घरतिर लागे, बाँकी जताततै सुते । चर्को घाम लागिरहँदा पनि एक अर्कामाथि खुट्टा चढाएर उनीहरु मस्त घुरिरहेका थिए । को केटा, को केटी त्यति भेउ नपाइने गरि । सायद थकान र निन्द्राको बीचमा मानिस जेन्डरको चेकपासभन्दा माथि उठ्छ । ।
११ बजेर ५० मिनेटमा उसको निद्रा खुल्यो । आँखा मिचेर टुक्रुक्क बस्यो र वरपर आँखा डुलायो । पर, त्यही सोफामा, जहाँ उनीहरु प्रेमिल भएका थिए, त्यहाँ स्विटी असरल्ल लडिरहेकी थिई । ऊ विस्तारै आँखा मिच्दै सोफामा बस्यो र एक क्षण उसको सेतो टिसर्ट र सेतो टिसर्टबाट मधुरो देखिएको कालो ब्रालाई हेर्यो र घुटुक्क थुक निल्यो ।
टिसर्ट मिलाई दिए जस्तो गर्यो तर उसको आँखाले त्यो कालो कपडा छोड्नै मानेन ।
‘लभ यु स्विटी, माफ गर । तिमीले भनेजस्तो म सिभिल सर्वेन्ट हुन सक्तिनँ । मलाई गुण्डा नै रहनदेऊ ।’
उसले सोफा तल झरेको हात उठायो र चुपुक्क माया गर्यो ।
ठिक यहि बेला स्विटीको आँखा खुल्यो । ऊ शान्त स्वरमा आँखा मिच्दै उठी र सोफामा ढल्केर उसलाई हेरी । मुसुक्क हाँसी र उसको छातिमा अडेस लागी ।
दुबैले घडी हेरे ।
११ बजेर ५५ मिनेट गएको थियो ।
‘अहिले मलाई के ग¥यौ ? म झण्डै तर्सिएँ ।’ स्विटीले मुन्टो उठाएर उसलाई आँखा तरि ।
‘माया गरेँ । सबैतिर ।’
‘ह्वाट डु यु मिन सबैतिर ?’
‘सबैतिर मतलब सबैतिर ।’
‘बुलसिट ।’ स्विटीले जुरुक्क उठेर उसलाई मुड्कीले हिर्काइ । त्यसपछि खुट्टा बजार्दै बाथरुमतिर लागी । बाथरुम ठिक अघिल्तिर पल्लो कुनापट्टी थियो । ऊ मुस्कुराउँदै स्विटी गएको हेरिरह्यो । बाथरुम बन्द गर्न फर्किएका बेला स्विटीले भनी, ‘‘‘यता नहेर तिम्रो आँखा यो भित्ता छेड्ने खालको छ ।’
‘मेरो आँखामा होइन, यो गगल्समा त्यो शक्ति छ । यो लगाएपछि त्यो वालभित्र तिमीले के के गर्छौ सबै थाहा पाउँछु ।’
‘छि, घिनास्ट ।’
‘प्रेममा सबै जायछ छ, डियर स्विटी ।’
‘नो चान्स । सँगै नुहाउने सपना नदेख ।’
‘म सपनामा होइन, विपनामा विश्वास गर्छु ।’
स्विटीले ओठ लेप्राउँदै ढोका बन्द गरी । उ सोफाबाट उठेर लामो आङ् तान्न थाल्यो ।
ठिक यति बेला पुरा नेपाल हल्लिन थाल्यो । मानिसहरु आत्तिएर रुन थाले । पहाड–मधेस हल्ला गर्न थाल्यो । धरहरा ढल्यो, वसन्तपुर दरवार स्क्वायार चरक्क चर्कियो । घरहरु पिङ् झैं मच्चिन थाले । पहाडका टाकुराहरु चिरा परे । कोकोहोलो गर्दै मानिस सडकमा आए । हेर्दैहेर्दा घरसँगै हजारौं मानिस ढले । लाखौं घर चर्किए । एकै क्षणमा महाप्रलय आयो र मानिसको सातो लिएर गयो । करिब ३० सेकेन्डका लागि समयले एउटा यस्तो त्रासदी दिएर गयो, जसलाई वर्षौवर्ष पूर्न सकिन्न । त्यहि भयावह यो घरलाई पनि दिएर गयो । यो पार्टी र पार्टीका सदस्यलाई पनि ।
१२ बजेर ५ मिनेटमा सबै युवा घर छाडेर गल्लीमा आइपुगेका थिए । निदाएकै अवस्थामा सबै दगुर्दै तल झरे । को कहाँ के गर्दैछ, कसैको होश थिएन ।
बाहिर आएर सबैले देखे, त्यो भव्य घरका पश्चिमतर्फको भाग एकतल्ला धसेको थियो । यस्तो घरबाट सकुशल वाहिर निस्कन सफल भएकोमा सबै आश्चर्य हुँदै खुसी थिए ।
‘हामी भाग्यले घर तल आइपुग्यौं, बाहिर आइपुग्यौं ।’ उनीहरु कराइरहेका थिए ।
तर उनीहरुलाई थाहा थिएन, उनीहरु मध्ये केवल दुई जना घरमाथि थिए ।
एकजना स्विटी, जो बाथरुममा चिर निन्द्रामा थिई । एकजना ऊ अर्थात यो कथाको नायक, जो खिड्की लगाएको बाथरुमको ढोका फुकाल्न जोड जोडले हिर्काउन खोजिरहेको थियो तर सकिरहेको थिएन ।
विश्व नर्सिङ दिवस : ‘पीपीईभित्र गुम्सिँदै सेवामा नर्सहरू’
फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म दिनका अवसरमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा २०१३ सालदेखि नर्सिङ
साहित्यकार ज्ञाननिष्ठ ज्ञवालीको खण्डकाव्य ‘आमा’ सार्वजनिक
लेखकका हालसम्म २० कृति बजारमा आइसकेको छ। यो २१ औँ कृति भएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको
विज्ञान कथा : मेरो कथा नलेखिदिनु !
वस्तुवादी अर्थशास्त्रको प्रभाव अथवा भौतिकताको नसामा परेका विकाशोन्मुख मुलुकका अहिलेका अधिकांश हामी प्रौढहरु सन्तानको उर्जावान
मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा इद–उल–फित्रको शुभकामना
जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाकाे मृत्यु